Fandevenana Nitondra Ireo Mpitaky Fanovàna Ao Syria Hankany Am-piangonana Niaraka Taminà Raozy Mena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Septambra 2014 3:08 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Español, Ελληνικά, Deutsch, русский, polski, Italiano, عربي
Nankany amin'ny fasana izahay, nanodidina ahy izy ireo, nitondra ny fahoriako ka lasa maivamaivana amiko ny nitondra azy. Avy eo, nijanona niaraka tamiko izy ireo, nanatrika fombafomba sy fivavahana nandritra ny adiny iray sy sasany, izay tsy azon'izy ireo na tsy nikasika azy ireo hatrizay. Tsapako fa nilain'izy ireo ny nivavaka tahaka izany, tamin'ny fomban'izy ireo. Nangatahako izy ireo hamaky ny Fatiha ho an'i Neny. Fantatro fa tany anatin'ny fon'izy ireo tsirairay avy, misy fahadiovana ampy tsara handrian'ny fanahin'ny reniko am-piadanana. Nivavaka niaraka tamin'izy ireo aho, tamin'ny finoako sy ny azy ireo.
Mibilaogy ao amin'ny marcellita.com i Marcell Shehwaro ary mibitsika ao amin'ny @Marcellita, samy amin'ny fiteny arabo no voalohany. Vakio ato ny lahatsoratra hafa ao anatin'io andiany io.